नेपाली भाषामा बन्दै ‘एस.पी. खरेल–२’ « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
नेपाली भाषामा बन्दै ‘एस.पी. खरेल–२’
भोजपुरी फिल्मका कलाकारहरुले अभिनय गर्न लागेको नेपाली भाषाको फिल्म “एस पी खरेल’ भाग–२ को शुभ मुहुर्त शुक्रबार वीरगन्जमा गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका चर्चित एस.एस.पी. रमेश खरेलको जीवन र कार्यशैलीबाट प्रभावित भएर नेपाली भाषामा “एस.पी. खरेल–२” निर्माण हुन लागेको हो ।
चलचित्रलाई माँ राधिका इन्टरनेशनल मूभि प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो । लगभग तीन वर्ष अघि भोजपुरी भाषामा निर्माण गरिएको एस.पि. खरेल फिल्मका कलाकारहरुले नै यस सिनेमामा अभिनय गर्नेछन् । फिल्ममा एस पी रमेश खरेलको भुमिका वीरगन्जका भोजपुरी कलाकार विदेशी साहले अभिनय गर्नेछन् ।
फिल्मको छायांकन वीरगन्ज, पोखरा र काठमाडौंमा गरिने फिल्मका निर्देशक रमण बस्नेतले बताए । एस.एस.पी रमेश खरेलको खरो कार्यशैलीलाई आधार बनाएर राष्ट्रियता र इमान्दारितामा आधारित फिल्मको सुटिङ् एक महिनामा समापन गर्ने लक्ष्य निर्माण पक्षले राखेको छ।